Ọbụna Azụ Nwụrụ Anwụ Na-ese n'elu | Martech Zone
Na-etolite, otu onye nwere nchekwube na enweghị nchekwube zụlitere m, mama m bụ onye nwere obi ụtọ kachasị nwee ọ friendụ na-enweghị obi ụtọ ị nwere ike izute. Ọ gbara mbọ hụ na a zụlitere m nnukwu echiche, na-achọghị ihe ọ bụla ma ọlị maka mmadụ niile ma na-eme ike m niile iji nyere ndị mmadụ aka. Mgbe m bidoro ịmụ ihe na itozu okè, ajụrụ m ya ihe kpatara o ji enyere ụfọdụ ndị ọ na-enweghị mmasị na ya aka na nzaghachi ya dị mfe.
Matt mmadụ niile nwere ike ịka mma ma nyere ha aka na-enyere obodo aka. Cheta na “ebili mmiri na ebuli ụgbọ mmiri niile”. Amaghị m na ozi ya bụ nnukwu ozi m ga - ahọrọ n ’ịmụ akụnụba ma emechaa m gaa kọleji. Ọzọkwa amụtara m na a bịa n'ihe gbasara akụ na ụba, mgbe ihe dị mma "ebili mmiri na-ebuli ụgbọ mmiri niile."
Ọganihu dị ukwuu nke afọ 90 gosipụtara n'ezie na mama m na ndị prọfesọ econ ma ndị maara ihe. Ruo ihe karịrị afọ 15 (ruo na 2008) ịrị elu akụ na ụba welitere ụgbọ mmiri onye ọ bụla. Maka ọtụtụ azụmaahịa obere afọ ndị ahụ dị mma, ndị na-azụ ahịa bara ụba, uru bara uru ma yana ụfọdụ mbọ ọ dị mfe ịpụ ma chọta atụmanya dị njikere ma nwee ike itolite ego gị.
N’afọ 2008, ihe ọzọ abụrụ na ihe mama m gwara m bidoro inwe isi. Papa m bụ ezigbo mmadụ mana n'adịghị ka mama m, ọ dị ezigbo mma n'ichebe uche ya na ihe na-eme n'ezie. Ozi o zigaara m dịtụ iche. Ọ gwara m Ọbụna azụ nwụrụ anwụ na-ese n’elu mmiri. Ihe o bu n'uche bụ mgbe ebili mmiri na-arị elu ihe niile na-agbago ma ọbụghị ihe niile bụ ụgbọ mmiri. Isi okwu ya dị mfe, akụ na ụba adịghị emepụta adịghị ike, akụnụba ọjọọ na-ekpughe adịghị ike.
Kemgbe afọ ole na ole, anyị amụtawala ibi n’ozi papa m bi. Na anyị, m na-ekwu na aku na uba America. Anyị ahụwo ọtụtụ azụmaahịa ndị mere mkpebi adịghị mma. Ma mgbe oge dị mfe mkpebi ndị ahụ dị mma, enweghị ezigbo nsogbu ma ọ bụ nsonaazụ maka nhọrọ ọjọọ ahụ. Mana ozigbo anyị kụrụ ngọngọ n'okporo ụzọ ahụ, ekpughere ihe ndị ahụ na -emekarịkwa na ekpughere ya na-ebute ọdịda dị egwu
Dịka onye na-azụ ahịa ahịa, ana m eji ụbọchị m niile na ndị ọrụ azụmaahịa na-ahụ akụkụ ọhụụ nke azụmaahịa ha. Ndị ahịa ahụ ha chere dị ukwuu gbanwere na ha anaghị eme ihe ọ bụla karịa ịnya ịnyịnya nke ndị ahịa ole na ole na-eto eto. Ndị na-ere ahịa bụ ndị dị njikere ibelata obere ego na oge dị mma na-egbu ugbu a na ha enweghị ihe ọ bụla ga-alaghachi na nke ọzọ karịa ọnwụ ọnwụ.
Ndị ahịa ahụ na-anaghị atụ anya na-elele ahịa ahịa ha na-ada ugbu a ndị asọmpi na-ebupụta akaụntụ ha. Afọ abụọ gara aga adịghị ike ndị a enweghị isi, akụ na ụba siri ike, ndị na-azụ ahịa hiri nne ma n'akụkụ dị mma. Ọnọdụ akụ na ụba na-eto eto ma na-enwe usoro ahịa na-adịghị ike na ndị otu ahịa na-ezighị ezi bụ nsogbu, mana ha enweghị nnukwu nsogbu zuru oke idozi.
Taa ọ dị iche, azụmahịa gị na-ejide gị. Ndị ahịa gị na-achịkwa ọdịnihu gị ma ọ gwụla ma ị maara na ha na-arụ ọrụ site na atụmatụ ziri ezi, na usoro ziri ezi ma nwee ikike ikike ọbụlagodi mgbake ga-abụ ihe ịma aka.
Tags: ahia Bluetooth
Nov 22, 2009 na 2:53 PM
Hụ okwu a n'anya. Ọ bụ onye ikwu ya nso "Ọbụna klọọkụ agbajiri dị ugboro abụọ n'ụbọchị?"